Qalabka Manicure China Dril Nail Calan Warshadda jumlada iyo alaab -qeybiyeyaasha | Yaqiin
Isticmaalka tirada badan ee loo adeegsado qoditaanka qoditaanka ciddiyaha - Hagaajinta, qaabaynta, nadiifinta iyo qaar kaloo badan. Ku hagaaji cidiyahaaga si kaamil ah qoditaanka qoditaanka ciddiyaha.
Ku habboon cabbirka ugu badan 3/32 machine mashiinka daloolka ciddiyaha. Ku habboon saloon ciddiyaha, qolka qurxinta, isboortiga ama manicure pedicure, farshaxanka ciddiyaha DIY ee guriga.
YAQIN Tungsten Carbide Carbide Cill Drill Bit Set - Waxaa laga sameeyay carbide, walxaha ugu adag ee dheemanka ku jira, garaacyada faylka xirfadeed ayaa aad u adag si looga saaro ciddiyaha jel adag, oo abuuraya boodh yar oo leh khilaaf yar iyo kuleyl. Haddii aad tahay farsamayaqaan cidiyaha ama aad jeceshahay inaad cidiyahaaga ku samayso guriga, layliskan ciddiyaha tayada leh wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee xirmada oo ka kooban sahayda ciddiyahaaga xirfadeed.
Dhammaan qoditaanka layliga waa siman yihiin oo ha kululaan. Wuxuu ka ilaaliyaa maqaarka in aan waxyeello loo geysan. Way fududahay in la nadiifiyo Nadiifi oo nadiifi qoditaanka qoditaanka qaliin kasta ka dib. Ku xoq buraash kuna raaci biyo saabuun ah.
Foostada Kubadda Sare ee Badbaadada
Ka saar naqshadda ciddiyaha oo la dhigay meel u dhow aagga googoyska iyada oo aan waxyeello u keenayn ciddiyaha.Waxay u fiican tahay kuwa bilowga ah.
Samee shaqada dusha ciddiyaha si sahal ah
Si fudud u nadiifi boodhka ku yaal qaniinyada ama ciddiyaha.
Qaybaha koorta dhoobada ah
Ka saar maqaar -gooyaha iyo xabagta dheeraadka ah. Waxaa lagu isticmaalay ciddiyaha hoostiisa ama dhinacyada. Ku habboon isticmaalka sare ee ciddiyaha cidiyaha sababta oo ah baaxaddiisa caatada ah.
Ku xereynta jel ama boggag la bogsiiyey meel adag si loo gaaro aagagga. cidiyaha hoostiisa oo nadiif ah, dhinacyada, dhabarka. xardhay naqshadaha iyo khadadka dhoolla -caddaynta.
3/32, oo loo isticmaalo nadiifinta ciddiyaha hoostiisa/qaabeynta badeecada/gadaal. Si aad u nadiifiso agagaarka maqaarka iyo maqaarka.
Hore: Burushka ciddiyaha Nylon oo kulul oo Iibin ah
Xiga: Qoob -ka -ciyaarka Ciddiyaha Rainbow Rakibka Dheeman